Tesla anodzosera magetsi kuchipatara chevana muPuerto Rico | Green Renewables
Tesla anodzosera magetsi kuchipatara chevana muPuerto Rico
Zvinosuruvarisa, kwave kupfuura mwedzi kubva dutu rinoparadza Maria, iro rakaparadza Pota RikoMuchokwadi, zvakasiya dzinenge dunhu rese rakagurwa uye risina magetsi.
Elon Musk akati aida kubatsira chiwi kuvaka zvakare gridhi rako remagetsi, chimwe chinhu chatinofanira kuona. Parizvino, Tesla ari kutanga kuchengeta izwi rake uye akatove akaisa simba rezuva muchipatara.
Tesla yakaisa network yemagetsi ezuva uye mabhatiri ePowerwall kuChipatara chevana muguta reSan Juan. Uyezve, Musk ane zvaari donated $ 250.000 kubatsira vagari vemuPuerto Rico.
Iyo system yakavakwa mukati rekodhi nguva. Zvakatora zvisingaite vhiki kuisa zvese mapaneru nemabhatiri, maererano akataura imwe yenhengo dzedare revatungamiriri vechipatara.
Iyo kambani inoti iyo system pachipatara chevana inongova yekutanga kune akati wandei akafanana mapurojekiti. Hurumende yePuerto Rico yakaonga Elon Musk nekubatsira vanhuwo zvavo.
Maererano ne Gavhuna Rossello:
“Ndinotenda Tesla nekusarudza nzvimbo ino nekuti vana vazhinji vanotambura vanovimba nayo. "Pasina simba, vazhinji vangadai vasina kukwanisa kurapwa."
Kuiswa kweiyo Tesla gridhi rezuva kuChipatara chevana kunouya mazuva mushure meaimbova gavhuna wePuerto Rico, Alejandro García Padilla, tumira tweet umo mairatidza mamiriro ezvinhu avari kupinda kuvarwere munzvimbo zhinji dzePuerto Rico. Mumufananidzo wakaenda nemavhairasi tinogona kuona vanachiremba vachishanda vachishandisa tochi yemafoni kuti vaone.
Parizvino, mwedzi wapfuura kubva Hurricane Maria, vanhu vanopfuura mamirioni 2,5 muPuerto Rico (pamamiriyoni 3,4 anogara pachitsuwa ichi) vachiri vasina magetsi uye vasina kutaurirana.
1 Gogole uye AT&T
2 Mamwe maTesla Projects (Powerwall)
Gogole uye AT&T
Mamwe makambani akadai seGoogle kana AT&T ari kushandawo kudzorera kubatana magetsi uye kunyanya internet nhare pachitsuwa.
Muchokwadi, Alphabet yakabatana neAT & T kubatsira kubatanidza vagari, vachishandisa Mapuroya anopisa emhepo mabharuni (akagadzirwa neayo X Kambani chikamu) uye iyo LTE network ye runhare runhare. Parizvino, mabharuni ekutanga atora kubva kunzvimbo yavo yekutanga, mudunhu reNevada.
Balloons Project LoonSekureva kwekambani, ivo vanogona kufukidza kusvika kumakiromita zviuru zvishanu endima. Kune iro chikamu, AT & T inovimbisa kuti vakatokwanisa kudzorera internet kuwana kune 5.000% yevagari muPuerto Rico, asi kuchine shandira kuita. Pamusoro pekuwana internet, kuyedza kwakawanda kuchiri kudiwa kugadzirisa matambudziko nekundikana kweiyo gridhi yemagetsi pachitsuwa ichi, kunyanya kudzivirira chinhu chakadai kuti chiitike zvakare.
Mamwe maTesla Projects (Powerwall)
simba wall ibhatiri rekambani Tesla Simba, inotsigirwa neUS Tesla Motors. Powerwall mabhatiri anokwanisa kudzoreredzwa kwekushandisa pamba uye madiki maindasitiri. PKune makuru maisheni Tesla inopa iyo power pack izvo zvinogona kuyerwa zvisina mugumo kusvika kuGWh kugona
Hyperloop ndiro zita rekutengeserana rakanyoreswa nekambani yekutakura yemuchadenga SpaceX, yeiyo kutakura kwevatakuri uye zvinhu mumachubhu emuchina nekukurumidza.
Yekutanga Hyperloop sketch yaive zano rakaitwa kuruzhinji kuburikidza neyekutanga dhizaini dhizaini muna Nyamavhuvhu 2013, iyo yaisanganisira nzira yekufungidzira kuburikidza nenzvimbo ye Los Angeles kuSan Francisco Bay Area, parutivi rwenzira yaro yakafanana neInterstate 5. Ongororo yekutanga yakaratidza kuti nguva inofungidzirwa yenzira yakadaro inogona 35 maminitsi, zvichireva kuti vafambi vaizoyambuka nzira yemakiromita mazana mashanu nemakumi matanhatu paavhareji kumhanya yakatenderedza 970 km / h, ine inomhanya kwazvo 1.200 km / h.
SpaceX yakavambwa muna Chikumi 2002 naElon Musk kugadzirisa shanduko tekinoroji, nechinangwa chekupedzisira che tendera vanhu kuti vagare pane mamwe mapuraneti.
Iyo yakagadzira iyo Falcon 1 uye Falcon 9 maroketi, ayo anga ari yakavakwa nechinangwa chekushandiswazve nzvimbo kuvhura mota. SpaceX yakagadzirawo spacecraft space, iyo yakavhurwa kuita orbit neFalcon 9 yekutanga motapaceX dhizaini, bvunzo uye inogadzira zvinhu zvakawanda mukati-mumba, kusanganisira Merlin, Kestrel uye Draco maroketi injini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Tesla anodzosera magetsi kuchipatara chevana muPuerto Rico
Natural kushanya kunowedzera muSpain